PowerShell ကို Linux အတွက်ရပြီ Linux မှ
မင်္ဂလာပါ | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, ပရိုဂရမ်းမင်း, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
1 PowerShell ဆိုတာဘာလဲ။
2 Linux ပေါ်မှာ PowerShell
3 Linux တွင် PowerShell ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (DSC) ။
PowerShell ၎င်းသည် operating system ကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် interface တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows operating system ဖြင့်စက်တစ်ခုအတွင်းရှိအလုပ်များကိုယခုအချိန်အထိလုပ်ဆောင်ရန် command line များ (လူကြိုက်များသော console သို့မဟုတ် terminal) မှတဆင့် configuration နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ။
Linux ပေါ်မှာ PowerShell
ဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသတင်းကောင်းဆောင်ကြဉ်း!PowerShell ယခု Linux အတွက်ရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ယခင်က၏လိုက်ဖက်တဲ့အကြောင်းကိုလူသိများခဲ့သည် Bash မှာ ၀ င်းဒိုးမှာလူများစွာကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာ။ ထို့ကြောင့် Linux လူများသည် Open Source PowerShell အထောက်အပံ့ကိုကြိုဆိုခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏အဓိကအတွေးအခေါ်မှာ Linux သုံးစွဲသူများကို Windows သို့မပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲအိမ်မှပြသထားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အား Open Source ကမ္ဘာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထို့အပြင် PowerShell ကို သုံး၍ သို့မဟုတ် .Net နှင့်အလုပ်လုပ်သော developer များထံမှအထောက်အပံ့ကိုရည်ညွှန်းပါက ပို၍ ရှင်းပါသည်။
သင်၏ Linux စက်၏ PowerShell ထည့်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသွားခြင်း။ ပထမ ဦး စွာ PowerShell အသုံးပြုမှုတွင်မည်သည့်စနစ်များရရှိနိုင်၊ Ubuntu ဆာဗာ 12.04 LTS, 14.04 LTS နှင့် 16.04 LTS, SUSE Linux လုပ်ငန်းဆာဗာ ၁၀၊ ၁၁ နဲ့ ၁၂၊ Debian GNU / Linux ၆ နဲ့ ၇၊ Red Hat ဆာဗာ 5,6နှင့်7နှင့် CentOS 5, 6,7။
Linux တွင် PowerShell ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (DSC) ။
စတင်ရန် PowerShell ကိုမထည့်သွင်းမီ Open Management အခြေခံအဆောက်အအုံသို့မဟုတ် OMI ကိုအရင် install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် OMI ကိုသင် download နိုင်သည် link ကို.
OMI ကို install လုပ်သောအခါသင်အလုပ်လုပ်ချင်သော Linux system အရလိုအပ်သော package များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် .deb သို့မဟုတ် .rpm ။ DEB နှင့်အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်များမှာ Debian GNU / Linux နှင့် Ubuntu တို့ဖြစ်သည်။ RPM package များတွင် Red Hat, CentOS, SUSE နှင့် Oracle တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည် CentOS 64 x7 system ပေါ်တွင် OMI ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
package များကို install လုပ်ရန်လည်းလိုအပ်သည် OpenSSL ကို အကောင်းဆုံးကွပ်မျက်မှုအတွက်၎င်း၏ဗားရှင်း ssl_098 သို့မဟုတ် ssl_100 တွင်; ပထမတစ်ခုကို OpenSSL 0.9.8 ကိရိယာများတွင်တပ်ဆင်ထားသောဗားရှင်းနှင့်ဒုတိယ၊ OpenSSL 1.0 ဗားရှင်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် x64 / x86 ရှိဗိသုကာတစ်ခုရှိရမည်။ တပ်ဆင်ထားသော OpenSSL ဗားရှင်းကိုသင်သိလိုပါက terminal သို့အောက်ပါ command ကိုရိုက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးပြီးသည်နှင့် DSC (PowerShell) ကို CentOS764 XNUMX system တွင်ထည့်သွင်းရန်အောက်ပါ command ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဖော်ပြချက် - GNU Library
အနည်းဆုံးဗားရှင်း - ၃၁.၀၀
လိုအပ်တဲ့အထုပ်: Python ကို
အနည်းဆုံးမူကွဲ - ၂.၄ မှ ၃.၄
ဖော်ပြချက် - ပွင့်လင်းသောအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှု
ဖော်ပြချက် - OpenSSL စာကြည့်တိုက်များ
အနည်းဆုံး version: 0.9.8 or 1.0
ဖော်ပြချက် - Python ctypes library
အနည်းဆုံး version - Python version နဲ့ကိုက်ညီရမယ်
ဖော်ပြချက် - cURL HTTP သုံးစွဲသူစာကြည့်တိုက်
အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်၊ PowerShell ကိုသင်၏ Linux system ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်စနစ်များနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်းအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်သင့်လျော်သော package များကိုထည့်သွင်းရပါမည်။
၀ င်းဒိုးကိရိယာများမှဤအင်္ဂါရပ်အသစ်များသည်သုံးစွဲသူများစွာ၏လိုအပ်ချက်များ၊ စနစ်များ (Linux နှင့် Windows) နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ခြင်းတို့ဖြင့်လိုက်ဖက်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝ onboarding ဝေးဝေးဝေးသေးပေမယ့် configuration ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့အရေးကြီးသောတာဝန်များကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမောင်းနှင်သောဤကဲ့သို့သောခြေလှမ်းများနှင့်တကွ, လာမည့်တိုးတက်မှုမှာအရိပ်အမြွက်ရှိပါတယ်, ထိုပြိုင်ဘက်မှဆက်ဆက်သူတို့ကို သူတို့ရဲ့စနစ်အတွင်းရှိတစ် ဦး ချင်းစီ၏တာဝန်များကိုများအတွက်ပူးပေါင်းအတွက်ကွန်ပျူတာ။
PowerShell ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်ရယူနိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အသေးစိတ်အတွက် Microsoft မှ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » PowerShell ကို Linux တွင်ရနိုင်သည်
အိန်ဂျယ် ortiz ဟုသူကပြောသည်
နင်! စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်း။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ် ၀ င်းဒိုးဟာအမှိုက်တွေ၊ သူတို့မှာတစ်ခုခုရှိနေတယ်။ သူတို့က Sauron လိုဖြစ်ချင်တယ်။
Angel ortiz အားစာပို့ပါ
Linux PowerShell ကို install လုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ !!! ??? ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည် ပို၍ အားကောင်းပါက ... မေးပါ။ ငါဟာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် IDEA ဆိုတာဘာလဲ !!!!
PowerShell ကို bash (သို့) zsh ဖြင့်တပ်ဆင်ရန်အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ဒါကအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး gedit (သို့) ကိတ်ကိုသုံးမယ့်အစားစပျစ်ဝိုင်မှတ်စုစာအုပ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်………
အရာအားလုံးသည် .net နှင့် azure ဆာဗာများကိုကိရိယာများအားလုံးဖြင့်ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသောလူများရှိနေသေးသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးမွမ်းမံထားခြင်းမရှိသေးဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာသည် ၀ င်းဒိုးနှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်ကိုသတိရပါ။ Afip ကိစ္စစသည်
အကယ်၍ vim terminal နှင့်အခြားသူများသည်အစွမ်းထက်သည်မှန်လျှင်၎င်းသည်အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်သည်။
ငါနဲ့အခြားမေးခွန်းတွေအတူတူပဲ၊ Linux မှာ powershell ရှိတာကအဓိပ္ပာယ်ရှိသလား။ အသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။ Bash သို့မဟုတ် zsh သည် Linux အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများရသနည်း။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှထည့်သွင်းရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ရှင်းလင်းသောအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ သို့သော် Microsoft ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြား Linux အသင်း ၀ င်များပါ ၀ င်ရန်ကုဒ်ကိုထုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။